Tom Siani Zvinyorwa pamusoro Martech Zone
Zvinyorwa na Tom Siani
Tom inyanzvi yekutengesa pamhepo ane anopfuura makore mashanu echiitiko muiyi indasitiri yedhijitari. Iye ari zvakare kubatana pamwe nemamwe anozivikanwa mabhurandi kuitira kuti aunze traffic, kugadzira zvekutengesa fannels, uye kuwedzera online kutengesa. Akanyora yakawandisa nhamba yezvinyorwa nezveshambadziro yemagariro enhau, kushambadzira kwemaoko, kublogi, kutsvaga kwekuonekwa, nezvimwe.
Chitatu, October 28, 2020 Chitatu, Kurume 24, 2021 Tom Siani
Nhasi mapuratifomu enhau enhau ane basa rakakosha kuita muhupenyu hwedu. Mabhirioni avanhu kutenderera pasirese vanozvishandisa kutaura, kunakidzwa, kushamwaridzana, kuwana nhau, kutsvaga chigadzirwa / sevhisi, shopu, nezvimwe. Zera rako kana kwawakabva hakuna kukosha. Masocial network anokanganisa maitiro ako ezuva nezuva zvakanyanya. Iwe unogona kusvika kune vanhu vane zvakafanana zvido kune zvako uye nekuvaka hurefu hunogara hushamwari kunyangwe iwe usingazivikanwe. Unogona kunzwira tsitsi nevamwe vanhu vazhinji kuyambuka